Home जीवनशैली पिसाब पोल्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यस्ता घरेलु उपाय
पिसाब पोल्ने समस्याबाट धेरै मानिसहरु पीडित हुन्छन् तर पनि अझै पनि कतिपय मानिसहरु यस्ता समस्या लुकाउँछन् । यसर्थ यही समस्याले कतिपयको ज्यान पनि जान सक्छ । शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा पिसाब पोल्न सक्छ । तर, यो एकमात्र कारण भने होइन ।
पिसाब पोल्नु, पिसाब गर्दा पीडा हुनु जस्ता समस्याले अन्य रोगको पनि संकेत गर्छ । पिसाब किन पोल्छ र पिसाब यसलाई निको पार्न कस्ता घरेलु उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा तल चर्चा गरिएको छ ? किन पोल्छ पिसाब ? मुख्यतः पिसाव पोल्ने प्रमुख कारणमा पिसाव नलीको संक्रमण नै हो । पिसाब नलीको संक्रमण महिलाहरुमा धेरै देखिने गर्छ । गर्भवती अवस्थामा पनि यो धेरै देखिने समस्या हो ।
खबर वाइड संवाददाता - २०७७, २५ चैत्र बुधबार १२:१८ 0
Uncategorized ईश्वर प्रसाद रिमाल -सम्वाददाता - २०७७, २५ चैत्र बुधबार १२:१८ 0